Vari Kunze kweNyika Vorwisa Kuti Vakwanisewo Kuvhota Musarudzo dzeKumusha
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakawanda zvinoti zviri kudawo kuvhotawo musarudzo dzekumusha
Nyaya yekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vabvumidzwe kuvhota vari munyika dzavari yanetsa zvikuru, uye yaunza mutauro pakati pemapoka akasiyanasiyana.
Svondo rino sangano reZimbabwe Exiles Forum rakati riri kuronga kuenda kudare repamusoro reConstitutional Court kana Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, yakaramba yakatsika madziro panyaya yekurambidza vari kunze kwenyika kuvhota sezviri mubumbiro remutemo.
Ukuwo, imwe nhengo yeZanu PF iri kuUnited Kingdom, VaNick Mangwana, vakadenhawo mutunhu une mago mushure mekunge vabuda mune imwe vhidhiyo yakatorwa vari kumusangano webato ravo wepaogre kuMasvingo vachinge vaiti vari kunze havafanirwi kubvumidzwa kuvhota.
VaMangwana vanoonekwa pavhidhiyo iyi vachiti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vambomira kuvhota vari kunyika dzavari, vachiti vanoda kuvhota vanofanirwa kudzokera kumusha kunovhota.
Mashoko aVaMangwana aya akonzera mutauro mukuru mumadandemutande, vanhu vachiti VaMangwana neZanu PF ndivo vari kuramidza vana veZimbabwe vari kunze kuvhota sezvinoita dzimwe nyika.
Asi VaMangwana vaudza Studio 7 kuti mashoko avo aya akanga akanangana nenhaurwa yaive pamusangano webato ravo, kwete kuti vairambidza vanhu kuti vavhote.
VaMangwana vanotiwo bumbiro remitemo riripo haribvumidze kuti vanhu vari kunze vavhote, vachitiwo chimwe chinetswa ndechcekuti nyika haina mari yekuita izvi.
Asi VaSimba Mutero, vanove nhengo yeMDC T vari kuLondon, vanoti vanopokana naVaMangwana, sezvo hurumende iri iyo iri kukweva makumbo panyaya yekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti ifambidzane nebumbiro idzva remitemo yenyika.
VaMutero vanotiwo VaMangwana havafanirwi kutaura vakamirira vana veZimbabwe, sezvo bato ravo reZanu PF riri iro riri kutotyora kodzero dzevanhu munyika, mashoko anorambwa naVaMangwana vachiti ikodzero yavo yekutaura zvavanoda.
Hurukuro naVaNick Mangwana pamwe naVaSimba Mutero